Inona no lanjan'i Larry Rudolph? Mikaroha ny haren'ny mpitantana an'i Britney Spears teo aloha - Pop-Kolontsaina
Ny mpitantana an'i Britney Spears, Larry Rudolph, dia nametra-pialana tsy ela akory izay taorian'ny fitokisan'i Britney voafetra dia nametraka olana bebe kokoa. Larry Rudolph dia mpitantana azy efa ela.
Larry dia nanoratra taratasy tamin'ny 5 Jolay ho an'ireo mpiara-miombon'antoka amin'i Spears ary notendren'ny fitsarana Jodi Montgomery izay nilaza fa mikasa hisotro ronono amin'ny fomba ofisialy i Britney. Hoy koa ilay taratasy:
ny fomba handrosoana tsy misy fanidiana
Amin'ny maha mpitantana azy dia mino aho fa tombontsoan'ny Britney indrindra ny fialako amin'ny ekipany satria tsy ilaina intsony ny serivisiko matihanina.
Vakio ihany koa: 'Namoy ny ankohonany manontolo ity lehilahy ity': niampanga an'i Safaree ho nisoloky azy niaraka tamin'i Kaylin Garcia i Erica Mena, nilaza ny farany fa 'namana' fotsiny izy
Sarobidy Larry Rudolph
Ny sandan'ny Larry Rudolph dia manodidina ny 23 tapitrisa dolara. Mpandraharaha sy mpitantana manokana izy. Nanjary nalaza izy tamin'ny faramparan'ny taona 90 taorian'ny naha mpitantana manokana azy Britney Spears .
Teraka tao amin'ny The Bronx, New York, i Rudolph dia nanomboka ny asany tamin'ny maha-mpisolovava fialamboly azy. Nanambady an'i Ronna Llene Gross izy tamin'ny 1992 ary mizara zaza telo aminy. Nisaraka izy mivady taty aoriana ary tamin'ny 2017 dia nanambady an'i Jennifer Barnett i Rudolph.
Nanangana orinasa antsoina hoe Total Entertainment and Marketing Marketing izy tamin'ny fotoana tsy niarahany tamin'i Britney. Rudolph dia talen'ny Justin Timberlake, Jessica Simpson, O-Town, Toni Braxton, Brook Hogan, DMX, ary 98 degre.
Vakio ihany koa: 'Tsy nisy nanontany': nandehandeha tamim-pifaliana i Stephen Dorff tamin'ny filma an-tserasera, taorian'ny niantsoany an'i Scarlett Johannson's Black Widow 'fako'
Larry Rudolph no mpanorina orinasa mpamokatra anarana Reindeer Entertainment ary namokatra horonantsary sy andian-tantara marobe. Nanangana ny vondrona tovovavy amerikana-anglisy-kanadiana G.R.L. miaraka amin'i Robin Antin tamin'ny 2012.
Larry dia nanampy be tamin'ny fampiroboroboana ny asan'i Britney Spears nandritra ny taona 90. Nahavita be dia be izy tamin'izany fotoana izany. Na eo aza ny fiarovana ny nentin-drazana narahin'ny trangam-bahoaka tamin'ny 2008, nanohana an'i Spears i Rudolph ary nahazo valiny tsara ny rakikirany manaraka.
ahoana no hilazana raha misy vehivavy ao aminao
Vakio ihany koa: 'Nomeko azy ireo ny foko': Markiplier dia manohy manaloka ny Sour Patch Kids amin'ny fanandramana vatomamy 'tsara kokoa sy ambony' amin'ny horonan-tsary vaovao mahatsikaiky
ny fomba fanaovana fotoana lany any am-piasana
firy taona i dada be v
inona no dikan'izany rehefa misy bandy mijery anao tsy mitsiky
mahatsapa aho fa tsy mifanaraka amin'ny